7 nyaya dzinozivikanwa dzekudzivirira kana uchivaka nharembozha - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
7 dzinozivikanwa nyaya dzekudzivirira kana uchivaka nharembozha
Masangano mazhinji pakuyedza kwavo kwekutanga kunyorera anosunungura zvisirizvo zvine mutsindo zvakaitwa kumashure izvo zvisingakwanise kutsigira kunyangwe zvakakosha zvekushandisa nemabasa. Chimwe chikonzero ndechekuti masangano ari kukurumidza kuburitsa mafomu avo nekukasira uye vanokanganisa kana vasingatarise zvine hungwaru kune kuvandudza kweApp gadzira uye chingovhura iyo app.
nepo kunyorera kunogona kunge kuri kunze kwenguva, haisiye pfungwa huru uye ungatodonhedza vashoma vashandisi zvachose. Chero nguva painotangwa nezvikanganiso Anwendung yakadaro inopa iyo sangano mbiri inotyisa pasi rose.
# 1 Kuregeredza kuita zvakakwana chikuva zvirongwa
Android, iOS, Windows – three ruling Mapuratifomu, so before developing the app consider where you ought to develop your app. While any application engineer will forget to face this query, frequently they neglect to further analyze every choice available to them.
Paunogadzikana pane chero sarudzo yepuratifomu, ita shuwa kuti uri kufunga nezve imwe neimwe mikana uye sarudzo. Kana iwe ukaregeredza kuita sekudaro, iwe uri panjodzi yekudzora zvakakomba vateereri vako.
vamwe Developers pedzisa sarudzo yavo yeapp maererano nema stereotypes. Zvakajairika kuona mumwe munhu achigadzira app yeIOS sezvo vachivimba kuti kuita mari kungave kuri nyore paApp Store. Kunyangwe izvi zvingave zvinoshanda mune mashoma kesi, hazvisi zvese-zvinosanganisa. Zvakare, kune akawanda akasiyana fungidziro ayo anofanirwa kuenda muchikuva kutsunga.
Nepo iOS inogona kunge ichikurumbira muUS, Android inotonga pasirese pasirese, kazhinji mumipendero mikuru yakawanda kupfuura muUS Saka, kana uchinge waronga kuendesa kunyorera kwako munyika dzakasiyana, funga nezve Android kwete iOS.
# 2 Kudzosera kumashure kusasangana nezvinodiwa zvigadzirwa
Vanhu vazhinji vanoshandisa mafomu vakaona mamwe maapplication anotyisa muhupenyu hwavo. Imwe yemhando dzinotyisa kwazvo zvingangodaro zvikumbiro zvinowira senge wachi wachi, inotakurwa nema glitches uye inoita kunge isina kugona kupedzisa chero chinhu.
Panogona kuve nezvakawanda zvikonzero izvo backend zvivakwa zvine husimbe, zvimwe zvacho ndezvi:
Seva inogona kudzoka shure nekuda kwenzvimbo dzakasiyana-siyana dzakarongedzwa panowanikwa mafomati mazhinji mazuva ano.
Iwe unogona kunge uine nyaya dzinomhanyisa kodhi yekushandisa, kusvika kumafaira kubva ku diski, kana kudyidzana mukati mechipiri chechipiri nevashandisi pamusoro pehurukuro, nezvimwe.
Kugadzirisa nyaya iyi, ziva kudyidzana pakati pezvikamu zvakasiyana zveapp, iyo inozivikanwa seApplication Dependency Mapping (ADM).
Kuedza kutora mutoro kubva kuseva nekupa imwe yekudzosera proxy server. Iyo inopa akawanda mabhenefiti uye inomhanyisa webhu kukumbira nekupa SSL kumiswa, kumanikidza, caching, uye akasiyana mabhenefiti.
# 3 Inotyisa mushandisi interface
Vimba nayo kana kwete, kuwanda kwesoftware kunovimba neUI yayo. Vashandi vanobvisa huwandu hwakawanda hwe Mobile Apps from their mobiles when it doesn’t have a nice UI. As a user, everyone searches for an easy to use application that can be utilized over various mobile Mapuratifomu. They generally search for applications which are less confusing and are not at all difficult to operate.
Unogona kugadzirisa nyaya iyi nenzira shanu:
Ita shuwa kuti iyo yekufambisa system iri nyore sezvo ichi chiri chinhu icho chinoita basa rinokosha mune yakasimbiswa Mushandisi Yemukati.
Mhanya iyo A / B kuyedza yako mobile application.
Shandisa Heatmap, Appsee, uye Heatdata kuti uone zviri nani kuongorora.
Tora pro UI dhizaini, uyo anogona kunyatso kugadzira yako mobile application.
# 4 Unoptimized yakavharidzirwa kubatana
SSL / TLS kubatana kwakakosha kubva ku kuvandudza kwesarudzo Maonero sezvavanopa kunyorera ku data-in-transit. Saka, usavaregeredza! Sezvo ivo zvakare vanogona kuve nyaya pese pavanosiiwa vasina kugadziriswa.
Iyo isina kuvharidzirwa yakavharidzirwa kubatanidza inotungamira mukudzikira kwekuitwa kwechishandiso.
Kugadzirisa nyaya yakadai, kubatana kwakanyorwa kunofanirwa kuvandudzwa. Izvi zvinofanirwa kuitika nekusanganisa HTTP / 2 uye SPDY iyo inoderedza kubatana kwepamusoro nevashandisi nekungoda ruoko rwega rwega rwega chikamu.
Iwe unogona zvakare kugamuchira nzira dzakasiyana dzekutarisira nyaya, semuenzaniso, kushandiswa kweOpenSSL, Session Caching, Session Matikiti, nezvimwe.
# 5 Inononoka shanduko pakati pezvikwiriso
Mune iyi mhando yemagazini, kufambira mberi pakati pezviviri zvakapihwa skrini zvinotora nguva yakareba.
Iyi nyaya inogona kuitika nekuda kwekunonoka mashandiro senge kukumbira mabasa eserura kana kufona zvemo module zviito zviri kuitiswa "Pakutanga" chiitiko mubati wechinangwa skrini. Sezvo izvi zvichiitika pamberi pekupakurwa kwechidzitiro DOM, izvi zvinogona kukanganisa iyo yekuremerwa skrini nguva.
Edza kusaita anononoka zviitiko muOnlineize skrini yechiitiko inobata. Panzvimbo pezvo kuendesa aya mabasa kune imwe yechiitiko inobata senge Pane Yakagadzirira, inoitika mushure mekuratidzwa peji. Izvi zvinogona kukanganisa maitiro eapp yako, nekudaro, edza kunyorera kwako zvachose usati wawedzera shanduko dzako.
Muchiitiko chekuti kurudziro iri pamusoro isingatsigire mamiriro ako, shandisa Performance tab muChannel yeVashandisi Maturu kuti uwedzere kuita kugadzirisa matambudziko.
# 6 Kushandisa mapeji ewebhu saiti sereferenzi
Kana iwe uchifunga kuti nharembozha ishanduro yakakura yewebhu peji saka iyi ndeimwe yemitongo isina kurongeka inokonzeresa zvikumbiro zvakakundikana. Iko kunyorera kunofanirwa kuita pachena kukosha kwemutengi. Iko kukosha kwekupa hakufanirwe kunge kwakaenzana neicho chinopihwa nemasaiti.
A native application irrespective of designating a similar brand or bhizimisi ought to produce definite value to the mobile users. The user experience ought not to be upgraded for the mobile browsing but for the native mobile interface. This is the reason for utilizing site pages as a point of reference to design and develop a mobile app is a major mix-up.
Pano, isu tinopa yakakosha kifaa-yakatarwa maficha ayo munhu anofanirwa kuyeuka kana uchigadzira zvemuno zvinoshandiswa.
Chikumbiro chekuzvarwa chinofanira kushanda nesimba kusanganisa hunhu hwechigadzirwa sekufona, kutumira mameseji, kushandisa kamera, kushandisa mamwe maapplication akaiswa munhare yemushandisi seGoogle Drive uye DropBox.
Chishandiso chemuno chinogonesa nyore kuwana kune chengetedzo yedhijitari uye data.
Chishandiso chemuno chinofanirwa kuvakwa kurangarira chishandiso chakajeka saizi screen.
# 7 Siyanisa & chengetedza echitatu-bato maraibhurari zvinoshingairira
famba Developers must use a framework to consistently check for updates in the third-party code they use in their app, so the code persists current with the most recent adaptations. Neglecting to do as such could leave an associated chibatiso gap in their app that attackers can misuse.
Kugara kumusoro nezvazvino paboka - Kana asiri akawanda macoding maraibhurari uye mashandiro masystem - nekuti zvinogona kunetsa. Sezvo panonzwisiswa iko kushanda kwekuvandudzwa kwemaraibhurari echitatu-bato, mamwe masangano angangoda kudzikisira iro basa rasara nekudzora huwandu hwekodhi rechitatu-bato mumapurogiramu avo.
Saka, kunzwisisa mune zvinoitwa nemaraibhurari echitatu-bato kuri kukosha uye kutarisa kuti mashandiro acho akakosha zvakanyanya.
Kugadzira Anwendung inzira inobhadharisa uye inonyengera, zvikanganiso zvishoma pasina mubvunzo zvinogadzirwa izvo zvinoguma nekutambisa zviwanikwa uye nguva yekuwedzera zvinoita vese vashandisi nekambani kuvhiringidzika.
Asi iwe unogona kudzivirira zvese izvi zvikanganiso uye nekuvaka mhando yeapps nekupinda mukubata.